Meloxicam (မယ်လောက်စီကန်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Meloxicam (မယ်လောက်စီကန်)
Meloxicam (မယ်လောက်စီကန်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Meloxicam (မယ်လောက်စီကန်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Meloxicam (မယ်လောက်စီကန်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Meloxicam ကို အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါများတွင် အသုံးပြုသည်။၎င်းသည် အဆစ်များ နာကျင်၊ရောင်ရမ်း၊တောင့်တင်းခြင်းကို သက်သာစေသည်။meloxicam သည် စတီးရွိုက်မဟုတ်သော အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး (NSAID) အုပ်စုဝင် ဆေးတမျိုးဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်းကဲ့သို့ နာတာရှည်အခြေအနေများအတွက် အသုံးပြုလိုပါက အခြားဆေးများကို အသုံးပြုသင့်ပြီး ဆေးဝါးအပြင် အခြားသော ကုသမှုများကိုလည်း ခံယူသင့်ပါသည်။
အခြားအသုံးပြုမှုများ။ ။ဤနေရာတွင် ဖော်ပြမည့် အသုံးပြုပုံများသည် တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသော ဆေးအညွှန်းတွင်မပါဝင်သော်လည်း သင့်ဆရာဝန်က ညွန်းဆိုသော အသုံးပြုမှု အခြေအနေများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤနေရာတွင် ဖော်ပြမည့် ရောဂါအနေအထား အတွက် meloxicam ကို အသုံးပြုမည်ဆိုလျင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက် ရှိမှသာ အသုံးပြုသင့်သည်။
meloxicam ကို ဂေါက်ရောဂါအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
Meloxicam (မယ်လောက်စီကန်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
meloxicam ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း (အများအားဖြင့် တနေ့လျှင် တကြိမ်) ရေတဖန်ခွက်အပြည့်ဖြင့် သောက်ပါ။ ဆေးသောက်ပြီး အနည်းဆုံး ၁၀မိနစ်ခန့်အကြာထိ လဲလျောင်းခြင်းမပြုရ။ ဆေးရည်အသုံးပြုပါက ဆေးပမာဏကို မတိုင်းတာမီ ဆေးပုလင်းကို ကောင်းစွာလှုပ်ပါ။။ ဆေးနှင့်အတူပါလာသည့် ဇွန်းသို့မဟုတ် ခွက်ကို အသုံးပြုပြီး ဆေးပမာဏကို တိုင်းတာပါ(အိမ်သုံးဇွန်းကို မသုံးရပါ)။ တိုင်းတာရန် ပစ္စည်းမရှိပါက ဆေးဆိုင်တွင် တောင်းယူပါ။
အစာအိမ်ထိခိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဆေးကို အစာ၊နွားနို့ သို့မဟုတ် antacid များနှင့် တွဲသောက်ပါ။ ဆေးပမာဏ အနည်အများသည် သင်၏ ရောဂါအခြေအနေ နှင့် ဆေးကို တုန့်ပြန်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို တတ်နိုင်သရွေ့ လျှော့ချနိုင်ရန်နှင့် အစာအိမ်သွေးယိုခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ဆေးကို ဖြစ်နိုင်သမျှ အနည်းဆုံးပမာဏဖြင့် စတင်ပြီး ဖြစ်နိုင်သမျှ ကာလအတိုဆုံးသောက်သင့်သည်။ ဆေးပမာဏ များလျှင် အစာအိမ်အနာဖြစ်ခြင်း၊သွေးယိုခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်သဖြင့် တနေ့လျှင် ၁၅မီလီဂရမ်ထက် ပိုမသောက်ပါနှင့်။meloxicam သည် ဆေးအာနိသင် အပြည့်အဝပြရန် ရက်သတ္တပတ် ၂ပတ်ခန့် အချိန်ယူရလေ့ရှိပါသည်။ ဆေးအာနိသင် အများဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး ရစေရန် ဆေးကို အချိန်မှန်မှန် သောက်သုံးပါ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း တူညီသော အချိန်တခုတည်းတွင် သောက်ပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင့်ရောဂါ အခြေအနေ မသက်သာလျှင်ဖြစ်စေ၊ ပိုဆိုးလာလျှင်ဖြစ်စေ ဆရာဝန်ကို အသိပေးရမည်ဖြစ်သည်။
Meloxicam (မယ်လောက်စီကန်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Meloxicam ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Meloxicam ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Meloxicam ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Meloxicam ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Meloxicam ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Meloxicam (မယ်လောက်စီကန်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
meloxicam ကို မသောက်သုံးမီ
-သင့်အနေဖြင့် Meloxicam ၊ aspirin သို့မဟုတ် အခြား NSAIDများ (ဥပမာ။ ။Ibuprofen (Advil, Motrin)၊ naproxen (Aleve, Naprosyn)) သို့မဟုတ် အခြားသော အကိုက်အခဲပျောက် အဖျားကျဆေးများ သို့မဟုတ် အခြားဆေးဝါးတမျိုးမျိုးနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများရှိပါက ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။
angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors —-> benazepril (Lotensin), captopril (Capoten), enalapril (Vasotec), fosinopril(Monopril), lisinopril (Prinivil, Zestril), and quinapril (Accupril); cholestyramine(Questran); ဆီးဆေးများ; lithium (Eskalith, Lithobid, others); and
methotrexate (Rheumatrex). သို့မှသာ သင့်ဆရာဝန် အနေဖြင့် ဆေးပမာဏကို ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်ခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
-သင့်တွင် ပန်းနာရင်ကြပ်ရှိလျှင် အထူးသဖြင့် နှာခေါင်းပိတ်ခြင်း၊နှာရည်ယိုခြင်း သို့မဟုတ် နှာခေါင်းအတွင်းသားရောင်ရမ်းခြင်းများ မကြာခဏဖြစ်ပါက၊ခြေလက်များ ဖောရောင်ပါက၊ ကျောက်ကပ် သို့မဟုတ် အသည်းရောဂါများရှိပါက ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။
-သွားနှုတ်ခြင်းအပါအဝင် အခြားသော ခွဲစိတ်ကုသမှုများ ခံယူရန်ရှိပါက meloxicam သောက်သုံးလျက်ရှိကြောင်း ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Meloxicam (မယ်လောက်စီကန်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Meloxicam (မယ်လောက်စီကန်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါလက္ခဏာများ ခံစားရပါက meloxicam သောက်သုံးခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့် အမြန်ပြသပါ။
=ပြင်းထန်စွာ ဓါတ်မတည့်ခြင်း —-> ဖျားခြင်း၊လည်ချောင်းနာခြင်း၊မျက်နှာ သို့မဟုတ် လျှာ ဖောင်းကားဖောရောင်လာခြင်း၊မျက်စိထဲအလွန်ပူခြင်း၊အရေပြား နာခြင်း ထို့နောက် အနီစက် သို့မဟုတ် ခရမ်းရောင်အစက်များထွက်လာကာ အခြားနေရာများသို့ပျံ့သွားခြင်း (အထူးသဖြင့် မျက်နှာနှင့် ကိုယ်အပေါ်ပိုင်း)၊ အရည်ကြည်ဖုများထခြင်း၊ကွာကျခြင်း။
-အရေပြားတွင် အစက်များ အနည်းငယ်ထွက်ခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Meloxicam (မယ်လောက်စီကန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Meloxicam ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။)
စိတ်ကျရောဂါပျောက်ဆေးများ ဖြစ်ကြသော citalopram (Celexa), escitalopram
(Lexapro), fluoxetine (Prozac, Sarafem, Symbyax), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Paxil),
or sertraline (Zoloft) တို့ကို မသုံးစွဲမီ ဆရာဝန်နှင့် ဦးစွာ တိုင်ပင်ပါ။ အဆိုပါဆေးများကို NSAID များနှင့် တွဲဖက်သောက်သုံးခြင်းဖြင့် သွေးခြေဥခြင်း၊သွေးထွက်ခြင်းများကို ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။
အခြားသော ဆေးများ သုံးစွဲနေပါကလည်း ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။ အထူးသဖြင့်
Cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune);
 Lithium (Eskalith, Lithobid);
 ဆီးဆေးများ—->furosemide (Lasix);
 Glyburide (diabeta, Micronase);
 Methotrexate (Rheumatrex, Trexall);
 Sodium polystyrene sulfonate (Kayexalate, Kionex);
 Steroids (prednisone and others);
 An ACE inhibitor —-> benazepril (Lotensin), enalapril (Vasotec), lisinopril (Prinivil,
Zestril), quinapril (Accupril), ramipril (Altace), and others; or
 aspirin သို့မဟုတ် NSAIDs (non-steroidal anti-inflammatory drugs) —–> diclofenac
(Voltaren), etodolac (Lodine), ibuprofen (Advil, Motrin), indomethacin (Indocin),
ketoprofen (Orudis), naproxen (Aleve, Naprosyn)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Meloxicam (မယ်လောက်စီကန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Meloxicam က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Meloxicam (မယ်လောက်စီကန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Meloxicam ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
-နှလုံးခွဲစိတ်ခြင်း ——> ခွဲစိတ်မှု မပြုလုပ်မီ သို့မဟုတ် ပြုလုပ်ပြီးချိန်တွင် အနာသက်သာစေရန် meloxicam ကို အသုံးမပြုရပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Meloxicam (မယ်လောက်စီကန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ Meloxicam ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
ကနဦးဆေးပမာဏ : ၇.၅ မီလီဂရမ် ကို တနေ့လျှင်တစ်ကြိမ် သောက်ရမည်။
ဆက်လက်ပေးရမည့် ပမာဏ : ၇.၅ မီလီဂရမ် ကို တနေ့လျှင်တကြိမ် သောက်ရမည်။
အများဆုံးပေးနိုင်သော ပမာဏ : တနေ့လျှင် ၁၅မီလီဂရမ်။
-Rheumatoid arthritis အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါအတွက်
ကနဦးဆေးပမာဏ : ၇.၅ မီလီဂရမ် ကို တနေ့လျှင်တကြိမ် သောက်ရမည်။
ကလေးတွေအတွက် Meloxicam (မယ်လောက်စီကန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးငယ်တွေမှာ Meloxicam ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
အသက် ၂နှစ်နှင့်အထက် : 0.125 mg/kg ကို တနေ့လျှင် တကြိမ် သောက်ရမည်။ အများဆုံး ပေးနိုင်သော ပမာဏမှာ တနေ့လျှင် ၇.၅ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။
Meloxicam (မယ်လောက်စီကန်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Meloxicam ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
သောက်ဆေးပြား : ၇.၅ မီလီဂရမ်။ ၁၅ မီလီဂရမ်။
Meloxicam ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Meloxicam. https://www.drugs.com/meloxicam.html. Accessed June, 30, 2016.
Meloxicam. http://www.everydayhealth.com/drugs/meloxicam. Accessed June, 30, 2016.
Meloxicam. http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/meloxicam- oral-route/description/drg-20066928. Accessed June, 30, 2016.